Macluumaadka aasaasiga ah Ka ilaali aragtida sagxaddaada iyo barkaddaada meel bannaan oo aan kala go 'lahayn oo ku socota nidaamka Glass Railing. Gawaarida muraayadaha galalka / barkadda barkadaha oo dhan si ay u xareeyaan muraayadaha dhalada, gudaha ama banaanka, rakibida nidaamka dhalada muraayadaha dhalada ah waa hab la hubo oo dab lagu helo si loo helo feejignaan isla markaana loo keeno fikradahaaga qurxinta / barkadda barkadaha dabaasha. Tilmaamaha 1) Raajada Sare ee Rafcaanka Sare ee Gelinta Muraayadaha Glass waxay bixiyaan muuqaal casri ah waxayna u dhawaaqaan nidaam kale oo rakibayaal ah oo maanta la isticmaalo. Dad badan, baakadaha muraayadaha quraaradu waa consi ...
Muraayada Badbaadada Qolka-Qolka
Macluumaadka aasaasiga ah Muraayadaha qolka qubeyska ee heerkulka leh: Kaliya xakameynta sirtaada Hadda wixii ka dambeeya, waxa kaliya oo ay qaadataa waa gujista wareejinta si looga dhigo albaabada qubeyskaaga daah furnaan. Tikniyoolajiyadda casriga ee smart ayaa lagu dhex daray badeecadeena si ay kaaga caawiso inaad muuqaalkooda u beddesho baahida. Haddii aad rabto inaad ka dhuumato indhaha foorjeerka ama aad iftiin dheeraad ah gasho, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad riixdo batoonkaas. Muraayadayada qabow ee darbiyada iyo albaabada qubayska, asturnaantaada had iyo jeer waa la ilaaliyaa! Ma waxaad raadineysaa quraarad aad ku buuxiso ...
Muraayad Nadiif ah / Yar oo Bir Yar Oo Loogu Tala Galay Qolka Shoolka
Macluumaadka aasaasiga ah Aynu wajahno, albaabka qubeyska ma ahan oo keliya albaab qubeyska, waa ikhtiyaar ikhtiyaar u leh qaabka u dhigaya muuqaalka iyo dareenka musqushaada oo dhan. Waa sheyga keliya ee ugu weyn musqushaaga waana sheyga soo jiidashada ugu badan. Kaliya taa taas ma aha, laakiin sidoo kale waa inay sifiican u shaqeysaa sidoo kale. (Waxaan ka hadli doonnaa taas daqiiqad gudaheed.) Halkan Yongyu Glass, waxaan ognahay nooca saameynta ay ku yeelan karto albaabka qubeyska ama tubbada qubayska. Waxaan sidoo kale ognahay in doorashada qaabka saxda ah, qoraalka, iyo ...
Muraayada casriga ah, oo sidoo kale loo yaqaan muraayadda kontaroolada iftiinka, galaaska la beddeli karo ama galaaska asturnaanta, waxay gacan ka geysaneysaa qeexidda dhismaha, warshadaha, gudaha, iyo warshadaha naqshadaha alaabada.
Qiyaasaha la Wadaago: Taladiiba
Codsiga: Qeyb, qolka qubeyska, balakoonka, daaqadaha iwm
Waqtiga Gaarsiinta: laba toddobaad
Muraayada casriga ah, oo sidoo kale loo yaqaan Gelitaanka Asturnaanta Garsoorka, waa xalka noocan ah. Waxaa jira laba nooc oo galaas smart ah, mid waxaa xakameeya elektiroonig, mid kale waxaa xukuma qoraxda.
Macluumaadka aasaasiga ah Yongyu Glass, iibiyaha xubin ka ah Ururka Ice Rink ee Mareykanka, wuxuu u dhoofiyay SGCC ansixinta 1/2 "iyo 5/8" alaabooyinka muraayadaha qaboojiyeyaasha ah warshadaha barafka barafka ee Mareykanka ilaa 2009. Waxaan dhoofinta tayo sare leh oo qiimo macquul ah badeecadaha muraayadaha indhaha oo la huwiyo macaamiisheenna lana wadaagaan macaashka laga helo ganacsiga. Faa'iidooyinka Kale Nidaamka muraayadda baraf-qaboojinta ee heerkulka loo isticmaalo waxaa si ba'an loogu isticmaalaa in lagu ilaaliyo dhagaystayaasha gadaashiisa. Nidaamyada muraayadaha barafka ah ee qaboojiyaha waxay u adeegaan dhowr ujeedooyin, ay ka mid yihiin: 1) Ilaalinta ...
Qaybaha Glass Nabdoonaanta
Macluumaadka aasaasiga ah Darbiga qeybinta galaaska Nabdoonaanta waxaa lagu sameeyaa galaas kulul / galaas la soo koobay / gudiga IGU, badanaa dhumucda galaaska wuxuu noqon karaa 8mm, 10mm, 12mm, 15mm. Waxaa jira noocyo badan oo kale oo galaas ah oo badanaa loo adeegsado qeyb ahaan, qeybinta galaas qabow, daabacaadda shaashadda muraayadaha xariifka ah, qeybinta galaas, qeybinta dhalooyinka, qeybinta quraaradu. Qeybta dhalada waxaa badanaa loo isticmaalaa xafiiska, guriga iyo dhismaha ganacsiga 10mm cad ee ka kooban galaasku waa 5 jeer oo xarig ah ...